Maalinta: Febraayo 26, 2019
Hordhaca Shirkii Mersin Metro
Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Burhanettin Kocamaz, Gaadiidka Mersin, oo ku dari doona aragtida cusub ee Shirka Dadweynaha Mersin ee la qabtay. Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Burhanettin Kocamaz ayaa ka qeyb galay kulanka horudhaca ah ee 1 ee Mersin Metro, [More ...]
Imtixaanka Tijaabada ee Isbitaalka Magaalada Eskişehir wuxuu bilaabmay
Iyada oo ay socdaan howlihii khadadka cusub ee loogu dari lahaa gaadiidka taraafikada Eskişehir ayaa si xawli ah usocda, wadahadalada tijaabada ee labada dhinac ayaa ka bilaabmay jihada Otogar iyo Şehir Hospital. [More ...]
Khadka Bedelka Bilaashka ah ee IETT ee Garoonka Atatürk
Khadka cusub ee IETT ayaa laga sameeyay magaalada Istanbul si loogu wareejiyo garoonka diyaaradaha Yenikapı-Atatürk oo lacag la’aan ah. Si kor loogu qaado tayada adeegga warbixinta IETT Agaasimaha Guud, si loo yareeyo isticmaalka gawaarida gaarka loo leeyahay, si loo helo dhaqanka caadooyinka wareejinta, Ataköy [More ...]
Maareeyaha Guud ee Cusub ee TCDD ee booqasho ku tagay magaalada Sivas
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, Agaasimaha Guud ee TCDD İsa ApaydınAli İhsan Uygun, oo loo magacaabay inuu wakiil u noqdo meeshiisa, ayaa booqashadiisii ​​ugu horreysay ku tagay Sivas. Gaadiidka iyo [More ...]
Ku-xigeenka CHP Deniz Yavuzyılmaz, Ankara, 9 ayaa ku dhintay qof ka codsaday damaanad khadadka YHT ka dib shilka. Wasaaradda Gaadiidka waxay ku dhawaaqday in Dammiinka 1.5 dollar + VAT dammaanad qaadaya qof rakaab ah. Sözcüee Deniz Ayhan [More ...]
Isticmaalka Sivas MÜSİAD ee booqashadiisa TÜDEMSAŞ
Madaxa Iskaashatada Warshadaha Madaxa Banaan iyo Ganacsatada (MUSIAD) Sivas Laanta Madaxweynaha Salim Eminoglu iyo xubno ka tirsan guddiga Agaasimayaasha ayaa booqday TUDEMSAS. Madaxweyne Eminoğlu, wuxuu booqday maareeyaha guud ee TÜDEMSAŞ Mehmet Başoğlu xafiiskiisa iyo [More ...]
Shaqaalaha Isgaadhsiinta Iskudhafan ee Ankara
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa howlaheeda basaska iyo shaqooyinka wadooyinka dhammaan caasimadda. Dowladda hoose ee Magaalada, waaxda cilmiga, caasimada marka lagu jiro jiilaalka si loo hubiyo nabadgeliyada wadista gawaarida iyo in laga hortago qulqulka [More ...]
Halkalı Tareenka Gebze Marmaray 43 Calaamadaha Joogsiga Waxaa La Shaaciyay: Waxaa la qorsheeyay in la furo bisha Maarso Halkalı Astaamaha 43-ta ah ee safka Gebze Marmaray waxay bilaabeen inay boos ka helaan tareenada Marmaray. Istanbul ayaa si weyn u fududayn doonta taraafikada [More ...]
Furitaanka 'Tarzanli' ee Bandhigga Taariikhda Caanka ah ee Uludağ
Bandhigga Taariikhda caanka ah ee Uludağ, oo lagu soo bandhigay asxaabta matxafka oo ku taal hoolka bandhig ee matxafka Magaalada, ayaa soo jiidasho weyn ka qaatay maalinta koowaad. 16 ee matxafka Magaalada. waxaa diyaariyey fanaanka İlhan Özer [More ...]
Ordu Zubeyde Hanim Street waxay ku sii socotaa inuu badalo
Dowladda Hoose ee Magaalada Ordu waxay sii wadaysaa howlaheeda waddo-socodka iyo wadooyinka waddooyinka qaybo kala duwan oo magaalada ah. Madaxweyne Engin Tekintaş ayaa yidhi, beton Stone plave Stone, dhagaxyo dhagaxyo leh marka loo eego baaxadda dayactirka wadooyinka ee Zübeyde Hanım Street. [More ...]
U soo guurista garoonka diyaaradaha ee Istanbul 5 dib loo dhigay April
Isbedelka barnaamijka wareejinta ee garoonka diyaaradaha Istanbul ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay. Hawsha dib-u-dejintu waxay ka bilaabmi doontaa 5 April 2019 saacadood 03: 00, 7 waxay bilaabmi doontaa Abriil 2019 saacadood 00: 00. Madaarka Ataturk, 7 Abriil oo ku yaal 00.00 loo qorsheeyay iyo [More ...]
Erdogan: gat Ankara Sivas YHT Line Sidoo kale mashruuca Yozgat Project Erd
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Square Square oo ka qayb qaadanaya dibad-baxa, oo looga hadlo muwaadiniinta. Erdogan wuxuu ku bilaabay hadalkiisa isagoo ku salaamaya dhamaan dadka Yozgat, waxaana uu sheegay in Yozgat uu ku jiro xiiso iyo farxad maanta. [More ...]
RayHaber 26.02.2019 Warbixinta Shirka
Iibso Qalabka Jirka (TUDEMSAS)
Tareen cusub oo ka soo jeeda Tokat iyo Turhal
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu shacabka kula hadlay isu soo bax ka dhacay garoonka Gaziosmanpaşa ee Tokat. Erdogan wuxuu khudbadiisa ku bilaabay isagoo salaamaya dadka reer Tokat wuxuuna yidhi: works Howlaha lagu dhisayo waddo tareen oo cusub oo u dhaxaysa Tokat iyo Turhal ayaa bilaabmay. [More ...]